बाढी पहिरोको फेरि अर्को विपत्ति : १० घर पुरियो, १२ जना बेपत्ता ! - नेपालबहस
बाढी पहिरोको फेरि अर्को विपत्ति : १० घर पुरियो, १२ जना बेपत्ता !
| ८:१७:५६ मा प्रकाशित
२८ भदौ, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका–७ घुम्थाङको नागपुजेमा गए राति खसेको पहिरोले कम्तीमा आठ घर र भीरखर्कमा कम्तीमा १० घर पुरिएको खबर छ ।
स्थानीय शिक्षक बजीर भण्डारीका अनुसार नागपुजेमा पुरिएका घरका सबै मानिस बेपत्ता छन् । भीरखर्कका पुरिएका घर र बेपत्ता मानिसबारे नजिक पुगेर जानकारी लिन कठिन रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
त्यस्तै जुगल गाउँपालिका–५ चनौटेमा पहिरो जाँदा केही घरहरु पुरिएको छ । त्यहाँ मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ । घटना थाहा हुनेबित्तिकै प्रहरी घटनास्थलतर्फ लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
ह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले भने कम्तिमा १२ जना मानिस बेपत्ता भएको बताए । गएराति परेको पानीका कारण ठाडो खोलाले वस्तीमा क्षति पुर्याएको हो ।
सुनकोसीमा धमाधम ५० बाख्रा मरे, किसान चिन्तित १८ घण्टा पहिले
प्राकृतिक प्रकोप अध्ययन, न्यूनीकरण तथा सहजीकरण कार्यदल गठन १ दिन पहिले
आज देशभर आंशिक बदलीको सम्भावना १३ मिनेट पहिले
व्यवसायी चन्द्र ढकाललाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि २८ मिनेट पहिले
मिलबाट ६० घनफिट काठ बरामद ३८ मिनेट पहिले
नगरपालिका शिल, सञ्चालनमा रहेका विद्यालय पुनः बन्द ४१ मिनेट पहिले